posts By: Mateyu Woodward
ipapashwe 28th EyoMdumba 2017 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi eNgilani, Enye Internationals Day. uvuselelwe 14 EyeNkanga, 2017 .
ipapashwe 12th EtiMnga 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi eNgilani, Indiya , Test Cricket. uvuselelwe 14 EyeNkanga, 2017 .
ipapashwe 13th EyeNkanga 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi Ostreliya, eNgilani, Indiya , Test Cricket. uvuselelwe 28 EyeNkanga, 2017 .
0 Siyavuyisana Bangladesh njengoko eNgilani Spin ukuba Yoyisa
ipapashwe 30th EyeDwarha 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi Bhangladeshi, eNgilani, Test Cricket. uvuselelwe 14 EyeNkanga, 2017 .
Ngxatsho Bangladesh kwi uvavanyo win lokuqala phezu England. Usindiso hola ngokucokisekileyo kwaye manqaku yayiza lula ugqibile 2-0 ukuya iinginginya kunokuba 1-1 draw.
Zombini okuhambisanayo iintengiso ebalaseleyo iqakamba vavanyo ukuba neemvavanyo amaqela omabini kunye Tigers engqondweni yam ethi iingongoma uloyiso phezu midlalo yomibini. In mehedi Hasan baye bafumana ngokucacileyo nekalikedo oselula abaseza kunceda ekuhambiseni iqela lakhe ukuba uloyiso ngaphezulu nxamnye namaqela phezulu. ... Funda Inqaku Pheleleyo
0 Ring of Steel Izisa Krazula iliso
ipapashwe 6th EyeDwarha 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi eNgilani. uvuselelwe 8 EyeDwarha, 2016 .
Ibiyi, ngeendlela ezininzi, Kuyakhuthaza ukubona amabutho Bangladesh kunye show kwemikhosi bawafaka ngaphambi kokuqalisa ODI series eqala ngomso (ngoLwesihlanu).
Imifanekiso umboniso ngokuqinisekileyo kubonisa ukuba kuthetha ishishini. Ndive omnye umhlalutyi radio efanisa ukhuseleko ukuba nithe nambona ukuba uhambo yi uBarack Obama. ... Funda Inqaku Pheleleyo
ipapashwe 16th EyeKhala 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi eNgilani, Test Cricket. uvuselelwe 17 EyeThupha, 2020 .
0 Super England ibango Super Series
ipapashwe 4th EyeKhala 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi eNgilani. uvuselelwe 3 EyeDwarha, 2016 .
Ukuphumelela uthotho lovavanyo akothusi - iindwendwe azisoze zikwazi ukumelana noAnderson kunye noBanzi kwiimeko zasekhaya - kodwa bendilindele uvavanyo lwe-sterner kwifomathi engaphezulu kwama-50.… Funda Inqaku Pheleleyo